ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်များအတွက် BASDEC | RayHaber | raillynews
[30 / 03 / 2020] မသန်စွမ်းမှုအကျိုးခံစားခွင့်များနှင့်အိမ်စောင့်ရှောက်မှုအကူအညီမှအကျိုးခံစားခွင့်ရသည့်မသန်စွမ်းသူများတိုးချဲ့လာသည်	06 တူရကီ
[30 / 03 / 2020] အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Coronavirus အခွင့်အလမ်းများကိုခွင့်မပြုပါ	အထွေထွေ
[30 / 03 / 2020] Coronavirus ထိတ်လန့်မှုသည် Izmir Metropolitan Municipality .. ! ၆ လွှာကိုကယ်ဆယ်ခဲ့သည်	35 Izmir
ပင်မစာမျက်နှာတူရကီMarmara ဒေသကြီး16 Bursaကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအသစ်များအတွက်ယူကေရှိ BASDEC
12 / 03 / 2020 16 Bursa, အထွေထွေ, ရာသီဥတု, Marmara ဒေသကြီး, ကာကွယ်ရေး, တူရကီ
Bursa ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုကုန်သည်ကြီးများအသင်း၏ခေါင်မိုးအောက်တွင်လှုပ်ရှားနေသော Bursa Space Defence and Aviation Cluster (BASDEC) သည်ဗြိတိန်နိုင်ငံနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏မန်ချက်စတာ၊ ကူဗန်တီ၊ အောက်စ်ဖို့ဒ်နှင့်လန်ဒန်တို့တွင်ကျင်းပသောနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးဆိုင်ရာအစည်းအဝေးများနှင့်အဖွဲ့များတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
Bursa ၏စီးပွားရေးလောက၏ခေါင်မိုးအဖွဲ့အစည်းဖြစ်သော BTSO သည်ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းပို့ကုန်စျေးကွက်အသစ်များအတွက်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ခဲ့သည်။ BTSO ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းလုပ်ငန်းများတွင် ဦး ဆောင်သည့်ကုမ္ပဏီများနှင့် Bursa ကုမ္ပဏီများနှင့်အတူတကွပူးပေါင်းသော BASDEC သည်နိုင်ငံခြားစျေးကွက်များတွင်လုပ်ငန်းများကိုအနှောင့်အယှက်မရှိဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကွဲပြားခြားနားသောတိုက်ကြီးများရှိအရည်အချင်းပြည့်ဝသောပွဲများနှင့် B2B အဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါ ၀ င်သော BASDEC သည်ဤတစ်ကြိမ်တွင်ဗြိတိန်နိုင်ငံတွင်ရပ်နားသည်။ ယူကေနိုင်ငံခြားရေး ၀ န်ကြီးဌာန၏အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်သွယ်ရေးဌာနမှစီစဉ်သောနှစ်နိုင်ငံစီးပွားရေးအစည်းအဝေးများနှင့်အဖွဲ့များတွင်သူသည် Bursa ၏စီးပွားရေးနှင့် BASDEC ကုမ္ပဏီများ၏နည်းပညာထုတ်လုပ်မှုစွမ်းရည်များနှင့်ပတ်သက်သည့်သတင်းအချက်အလက်များကိုပေးခဲ့သည်။
BASDEC ဥက္က္ဌ Mustafa Hatipoğluက Cluster တွင်ကုမ္ပဏီ ၁၂၀ ကျော်သည် Bursa ကုန်သွယ်ရေးနှင့်စက်မှုလုပ်ငန်းလက်အောက်တွင်လည်ပတ်နေသည်။ Hatipoğluကကုမ္ပဏီများသည်တူရကီနှင့်ပြည်ပရှိတရားမျှတသောအစီအစဉ်များတွင် UR-GE နှင့် BTSO ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ဆောင်ရွက်သည့်ပြွတ်သိပ်ခြင်းအစီအစဉ်များတွင်မျှတသောအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ခဲ့ကြပြီးကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းလုပ်ငန်းများတွင်အရေးကြီးသောအစည်းအဝေးများရှိသောယူကေအစီအစဉ်သည်အလွန်အကျိုးဖြစ်ထွန်းကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ ဟတ်ပိုလိုသည်အင်္ဂလန်စီးပွားရေးခရီးစဉ်တွင်လေကြောင်းနှင့်ကာကွယ်ရေးနယ်ပယ်တွင် Bursa ၏အလားအလာကိုအသေးစိတ်ဖော်ပြခဲ့သည်ဟုအလေးထားပြောကြားခဲ့သည်။
OXFORD IN BURSA နှင့် BASDEC ၏တင်ပြ
အထူးသဖြင့်ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းပို့ဆောင်ရေးကဏ္inများတွင် BASDEC ၏ကုမ္ပဏီများဖြစ်သည့်ကုမ္ပဏီများသည်ဟက်တိုပေါကဆက်လက်ပြောကြားသည် -“ မော်တော်ယာဉ်၊ စက်ယန္တရားနှင့်အထည်အလိပ်ကဏ္differentများတွင်ထုတ်လုပ်မှုအတွေ့အကြုံရှိသော Bursa ရှိမဟာဗျူဟာကဏ္ sectors များ၏ယှဉ်ပြိုင်မှုအားကောင်းလာစေရန်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်။ BASDEC ကိုယ်စားဗြိတိန်နိုင်ငံသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်အတွင်းကျွန်ုပ်တို့သည်တူရကီကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းရှိ BASDEC ကုမ္ပဏီများ၏နေရာနှင့်လွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပေးခဲ့သည်။ အစီအစဉ်၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းကဏ္ different အသီးသီးမှကုမ္ပဏီများနှင့်တွေ့ဆုံစဉ် Oxford ၌ကျင်းပသော panel တွင် BTSO နှင့် BASDEC ကိုယ်စားသတင်းအချက်အလက်များကိုမျှဝေခဲ့သည်။ ထို့အပြင် Hartwell ကျောင်းပရဝုဏ်သို့သွားရောက်နေစဉ်ဗြိတိန်အစီအစဉ်တွင်ကျနော်တို့တူရကီ Umit Yalcin ၏သံအမတ်ကြီးအားဖြင့်တည်ခင်းဧည်ဧည့်ခံသို့တက်ရောက်သည်။ BASO ၏ ဦး ဆောင်မှုအောက်တွင်ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သော BASDEC၊ ကျွန်ုပ်တို့၏အာကာသကာကွယ်ရေးနှင့်လေကြောင်းအစုအဝေးအတွက်ထိရောက်သောဤအစီအစဉ်များသည်လာမည့်ကာလများ၌ဆက်လက်တည်ရှိသွားမည်ဖြစ်သည်။
ကာကွယ်ရေးစက်မှုလုပ်ငန်းမှ bebka လေကြောင်း, ရထားလမ်းစနစ်များနှင့်ထောက်ခံမှု
၀ န်ကြီး Turhan: Iststanbul Istanbul ဟာလေဆိပ်သစ်နဲ့အတူခေတ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်…
TÜDEMSAŞ R & D ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်တရားမျှတသောတက်ရောက်ခဲ့သည်
TCDD မိသားစု R & D ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းထိပ်သီးအစည်းအဝေးနှင့်ပြပွဲ
စပိန်က CAF Civity အင်္ဂလန်ခြံထွက်ပစ္စည်းလေ့
အဆိုပါဆုံးဖြတ်ချက် UK မှာတောင်ပိုင်းအနောက်တိုင်းလိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးမှပေးထားခဲ့သည်
အင်္ဂလန် Siemens DESIRO စီးတီးရထားအားဖြင့်လက်ခံရရှိပါလိမ့်မည်
Stateroom UK ရှိမိန်းမတို့အားဆွေးနွေးငြင်းခုံနေတဲ့အဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်စေခဲ့သည်ထားပါတယ်
လေကြောင်းအတွက် Yunuseli စိတ်လှုပ်ရှားမှု
ဝန်ကြီးချုပ်Yıldırım: ယနေ့တူရကီလေကြောင်းလောကီသားတို့သည်အရှိသကဲ့သို့ကောင်းစွာ xnumx'inc မြင့်တက်
နိုင်ငံတကာ Arena အတွက်ပိုင်ရှင်လေကြောင်း
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များ Bursa ကုန်သည်ကြီးများအသင်း
Alanya ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက် Coronavirus အစီအမံ
Adana ရှိ Metro နှင့်ဘတ်စ်ကားမှတ်တိုင်များတွင်ပိုးသတ်ဆေးလေ့လာမှု
30.03.2020 Coronavirus အစီရင်ခံစာ - ကျွန်ုပ်တို့သည်လူနာ ၅၉ ဦး ကိုဆုံးရှုံးခဲ့သည်
သမိုင်းထဲမှာယနေ့တွင်: မတ်လ 31 1868 Rumeli မီးရထား
Konya Metropolitan မှDolmuşသို့ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတက္ကစီနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများ
amomamoğlu၏ဘတ်စ်ကားနှင့်ပြည့်နေသောကုမ္ပဏီမှ“ တုန့်ပြန်မှုနိုင်ငံရေးသာဖြစ်ပါကသူရဲကောင်း” ထံမှပြင်းထန်သောတုန့်ပြန်မှု
ဂျာမန်ဘဏ္Financeာရေးဝန်ကြီး Schaefer သည်မြန်နှုန်းမြင့်လိုင်းပေါ်တွင်သေဆုံးခြင်း
Coronavirus Shock ကို IETT Staff သို့!7လူများ Quarantined
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Coronavirus အခွင့်အလမ်းများကိုခွင့်မပြုပါ
ဝယ်ယူရေးအသိပေးစာ: 49 E1 နှင့် 60 E1 ကွန်ကရစ်ညှပ် Crossmember ၏ထောက်ပံ့ရေး
31: မတ်လ 10 00 @ - 11: 00
Metro Istanbul သည်မသန်စွမ်းသောအလုပ်သမား ၂၇ ဦး ကိုစုဆောင်းမည်
Alstom ၏ပထမဆုံးသုညထုတ်လွှတ်မှုရထားပေါ်တွင် Canray သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလက်မှတ်
Ankara တွင် Coronary ရောဂါကူးစက်မှုကိုဆန့်ကျင်။ ရုန်းကန်နေရသည်
TÜVASAŞကာလတိုလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုစနစ်သို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်! အလုပ်သမား ၇၀၀ ကိုနေအိမ်များသို့ပို့ဆောင်သည်
အစ္စတန်ဘူလ်လေဆိပ်မှ Cut 13 သန်းသစ်ပင်များ